Deegaanka uu ku dhashay ninka fuliyay weerarka Tunisia - BBC News Somali
Deegaanka uu ku dhashay ninka fuliyay weerarka Tunisia
28 Juunyo 2015
Image caption Dalxiisayaasha oo dhan ayaa Tunisiya isaga baxaya
Iyadoo ehellada iyo saaxiibada ee dadkii dalxiisayaasha ahaa ee lagu laayahay xeebta, Tunisiya ee maalintii Jimcaha, ay weli ku dadaalayaa dhibaatada soo gaartay, ayaa hadana magaalada magaalada Gaarfour, oo ah meesha uu ku dhashay qofka la sheegay inuu weerarka qaaday uu ku dhashay, uuna ku barbaaray ayaa sidoo kale la yaaban weerarka.
Ehelka iyo saaxiibada 23 sano jirkan ardeyga ahaa, Seifeddine Rizgi, kaas oo lagu sheegay inuu yahay qofka dilka geystay, ayaa la sheegayaa inaan weligii laga shakinin inuu dhacdadaas oo kale qorsheynaayo.
JM ayaa warkan ka soo diray magaalada wiilkaasi dhallinyarada ah uu ku dhashay, Gelle ayaa soo jeedinaaya.
Dareenka deegaankan Gaarfuur waa mid aad u kacsan, waxayna aamini la’yihiin arrinta.
Waxa ay la mid tahay magaalo qofkastaa uu garanaayo qofka kale, mana jiro qof qiyaasi kara in mid ka mid ah caruurtooda uu falkan oo kale sameeyo.
Ehelka Seifeddine Rizgi, waxa ay ku tahay musiibo. Aabihii, oo ka shaqeeya jidadka Tareenada, iyo hooyadii iyo walaashii ka yar ayaa dhammaan la xiray, waxaana la weydiinaayaa su’aalo, lamana arkin tan iyo markii la xiray.
Waxaa sidoo kale su’aalo ay booliska weydiinayaa inta badan saaxiibadiisa ay aadka isugu dhowaayeen.